IZimbabwe iphulwe izinhliziyo yiSenegal kwi-Afcon
UMGADLI weLiverpool neSenegal uSadio Mane ebungazwa ngozakwabo emuva kokuvalela phakathi iphenathi eyephule izinhliziyo zabantu baseNingizimu nezwakazi i-Afrika ngoMsombuluko ntambama Isithombe: BACKPAGEPIX
Senegal (0) 1
BASALE bechaya iandla abadlali beZimbabwe kulandela indlela abashaywe ngayo iSenegal emdlalweni ka-Group B kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) odlalwe eBafoussam Omnisport Stadium, eKouekong, izolo ntambama.
ISenegal itabalase yaze yathola iphenathi ngomzuzu wokugcina okuyiyona indlela eqoqe ngayo amaphuzu amathathu ngonyawo lukakaputeni uSadio Mane.
Izithenjwa zeSenegal okungonozinti u-Eduard Mendy weChelsea noKalido Koulibaly weNapoli azizange ziwuqale lo mdlalo ngenxa yokutholakala neCovid-19 ngaphambi kokuqala kwawo.
Njengoba bekulindelekile, akuphelanga ngisho umzuzu owodwa umdlalo uqalile kwacishe kwavalwa amehlo kwiZimbabwe kulandela ishodi likaBouna Sarr alijikijele ekude ladlula kancane eceleni kwepali.
Okusheshe kwacaca kulo mdlalo, inhloniphho amaWarriors abeyikhombisa iSenegal kwazise abadlali bayo (iSenegal), bebebonakala ngisho ebusweni ukuthi umdlalo ulula kubona.
Usuyela emizuzwini yokuqala engu-15 bese kungathi iSenegal iyazijimela kwazise ibizenzela kushode lona kuphela igoli.
Imizamo yeZimbabwe yize ibimbalwa, ibigcina ngokuphela emoyeni njengoba cishe iqembu lonke likaNorman Mapeza belihleli emuva.
Ingqayizivele yethuba elitholwe iZimbabwe ngomzuzu ka-30, idlale ngalo ngesikhahti uKnowledge Musona, ebeka phezu kwamapali i-freekick ebiseduze kwamapali eSenegal.
Nakwesesibili isiwombe umdlalo ubusalokhu uqhubeke ngendlela efanayo nele obekwenzeka ngayo kwesokuqala lapho iSenegal iliphethe lonke ibhola kodwa lutho ukubhakuzisa inethi.
Nakuba iZimbabwe isiqede kahle isiwombe sokuqala (kwazise iyona ebisibonakala ingcono ngemizuzu yaso yokugcina), kodwa ibuye yehlisa ngasekuqaleni kwesesibili umdlalo wabuyela ngokugcwele ekuphathweni iSenegal.
Obekwenza lo mdlalo uhlale uyingozi kwiSenegal ukuthi yize ibiwakha amathuba kodwa ubelokhu evimbe kahle njalo uPetros Mhari obevimbele iZimbabwe.
IZimbabwe icishe yawona umcimbi ngomzuzu ka-84 ngesikhathi i-freekick kaMusona icishe ingena ngonyawo luka-Ishamael Wadi obese ekhombisa ukuzethemba okumangalisayo ngemizuzu yokugcina eyishumi yomdlalo.
Imizuzu emithathu yokugcina, iZimbabwe iyidlale ngaphandle kukaMusona okhishwe ngohlaaka ngoba eselimele.
Ngomzuzu wokugcina esikhathini esengeziwe unondweba, iSenegal ithole iphenathi ethathwe uMane wayibeka enethini.